Shiinaha Customized boorsada boorsada College, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Bacda ardayda > Boorsada kuleejka
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyni waa nashqadeynta, soo saarida iyo iibinta alaabada boorsada, sida boorsooyinka Laptop-ka ee looga hortago xatooyada, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka banaanka, cayaaraha boorsooyinka dhabarka, ruushka, boorsooyinka garabka iyo alaabooyin kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarinnaa ganacsiyada kale. Tusaale ahaan, nashqadeynta iyo soosaarka: bacaha dhexda, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, boorsooyinka qoriga, boorsooyinka taatikada militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo alaabada kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo tayo fiican leh, waxaanna macaamiisheenna siin karnaa adeegga habeyn wax soo saar hufan, halka aan sidoo kale u bixin karno alaabteena tayada sare leh ee asalka ah macaamiisha iibka ah Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaan mudnaanta siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 ee mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab badan oo wax soo saar iyo shaqaale soo saar. Baaxadda weyn waxay noo oggolaaneysaa inaan si dabacsan u geyno khadadka wax soo saarka si loo gaaro hadafka wax soo saar hufan. Waxaan siinaa macaamiisha adeegyo isku dhafan oo ka imanaya nashqadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho sumadeena, fadlan nala soo xiriir:
1. Soo bandhigida alaabada boorsada jaamacadda:
(1) Boorsadan kuleejka ah waxay ka sameysan tahay 16A shiraac, dushana waxaa lagu daboolay daahan biyaha celiya, kaasoo si wax ku ool ah uga hortagi kara roobka inuu ku qoydo gudaha kiishka dugsiga muddo gaaban. Dharkani wuxuu leeyahay astaamaha u adkaysiga abrasionka iyo dareenka gacmaha oo aad u fiican.
(2) 210D polyester oxford maro ayaa loo isticmaalaa gudaha, kaas oo leh xoog silig.
(3) Waxaa jira boorsooyin kombuyuutar lagu keydiyo iyo boorsooyin ipad gudaha ah.
(4) Muuqaalka casriga ah iyo nashqadeynta-baaxadda weyn labaduba waa muuqaal qurxoon waxayna hanan karaan agabyo badan oo iskuulka ah.
(5) Boorsada jaamacadda waxay isticmaashaa furitaanka suunka. Furitaan balaaran ayaa sahlaya helitaanka waxyaabaha.
(6) Waxaan u isticmaalnaa qalab bir ah oo tayo sare leh boorsadan kuleejka ah, taasoo si weyn u wanaajin karta heerka isticmaalka shandada oo cimri dheereynaysa adeegeeda.
(7) Maqaar tayo sare leh ayaa loo istcimaalay inay tahay qurxin iyo waxqabad qaybo ka mid ah boorsada jaamacadeed.
(8) U isticmaal suuf laastikada oo tayo sare leh suun si aad u yarayso culeyska, una isticmaal shabag laastik ah oo neefsan kara qeybta hoose, kaasoo si wax ku ool ah ugu qeybin kara cadaadiska xamuulka isla markaana leh saameyn hawo leh
2. Boorsada kuleejka product parameters (specifications)
Ardayda jaamacadaha ama kuliyadaha
210D maro Oxford
Dhererka 30cmX Width 15cmX Dhererka 41cm
3. Astaamaha iyo codsiyada alaabada boorsada kulliyada
(1) Adiga oo ah arday jaamacadeed, waxaad u badan tahay inaad u safarto kana soo noqoto fasalka aan joogsi lahayn maalinta oo dhan. Tani waa sababta boorsada wanaagsan ay muhiim u tahay-waxaad u baahan tahay inaad ku keydiso buugaagta xusuusta, qalimaanta, buugaagta wax lagu qoro iyo laptops meel. Maaddaama boorsadaada dugsiga sare ay u baahan tahay in kor loo qaado, waxaa la joogaa waqtigii lagu maal-gelin lahaa wax sii waara inta lagu jiro xilliga ku-celinta dugsiga.
(2) Marka loo eego tijaabooyinkayaga, waxaan ogaanay waxa boorsada wanaagsan leh. Waxay noo ogolaaneysaa inaan sameyno qiimeyn heer sare ah oo ku saleysan tijaabooyinka, khibrada iyo kuwa ugu fiican ee la iibsado, oo lagu daro qaabab cusub oo xiiso leh, si loo xusho Alaabtaan la xushay. Markaad iibsaneyso boorsada ugu fiican ee jaamacadda, hubi inaad raadiso astaamaha soo socda ka hor intaadan iibsan:
· Daboolka difaaca laptop-ka, wuxuu ilaalin karaa laptop-ka wakhti kasta iyo meel kasta.
· Nidaamka abaabulka, sida bacda jiinyeerka ama bac qalin.
· Suun laalaabay oo suufan, raaxo leh oo raaxo leh.
· Maro ka samaysan polyester cufan ama naylon, waara.
Shandad gaaban iyo mid gaaban â € “shandad weyn ayaa sababi karta xanuun dhabarka ah.
Astaamaha kor ku xusan waa waxa aan haysanno, waxaan kaloo soo saari karnaa inbadan oo ka mid ah boorsooyinka kulliyadda.
5. Baakadaha iyo geynta boorsada iskuulka
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: 41cm X 30cm X 15cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakadka naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 43cm X 33m X 45cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 10Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 8.5Kg.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadayn doonaa baakadka boorsadan kuleejka ah iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
(9) Haddii aad ubaahantahay shaybaarka shandadan boorsada ah, waxaan dooran doonaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(1) Waxaan si adag u xakamayn doonnaa tayada badeecada oo aan kuu soo gaarsiin doonaa iyada oo la marayo heerka dhaafitaanka 100%.
(2) Waxaan sameyn doonnaa wax kasta oo suurtagal ah si aan kuu badbaadinno kharashyada.
(3) Sanduuqayaga shirkadda ayaa si joogto ah u shaqeynaya waxaana ka shaqeeya shaqaale xirfadlayaal u ah adeegga macaamiisha. Waad noo soo qori kartaa talo iyo cabasho wakhti kasta. Waxaan u aqrin doonnaa una soo jawaabi doonnaa si hufan oo taxaddar leh.
(4) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saar ee alaabta dalabka waqtiga loogu talagalay inta lagu gudajiro howlaha wax soo saarka, si aad si dhaqso leh u fahmi karto heerka amarka
(5) Waxaan xiriiri doonaa 24 saac. Waxaan u isticmaali doonaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka habsami leh.
(6) Ka dib marka muunad la iibiyo, haddii daabacaadda kowaad u baahan tahay in wax laga beddelo, waxaan ku beddelaynaa muunadda sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamka oo dhan ee soo saarista muunadda labaad waa gebi ahaanba bilaash.
Q1. Ma waxaad tahay warshad ama ganacsade?
Q2. Maxay yihiin shuruudaha lacag bixinta?
Q3aad. Waa maxay waqtigaaga hogaaminta ee wax soosaarka ballaaran?
Q4. Qaab sheegis ah kee aqbashaa? Immisa maalmood ayaa muddada xigashada?
Q6. Intee in le'eg ayey kugu qaadaneysaa inaad la xiriirto oo aad jawaab celiso?
S8: Waa maxay wax soo saarkaaga waxsoosaarka badan?
S9: Ma leedahay xad MOQ ah?
(4) Warbixinta tijaabada alaabada waa la bixin karaa.
(5) Waxaan nahay soo saaraha boorsooyinka iskuulka Disney, boorsooyinka Wal-Mart iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Boorsada kuleejka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka
Boorsada dugsiga hoose
Boorsada ardayda dugsiga dhexe